::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather राजधानी एनआरएनमय हुँदै, एनआरएन दिवस मनाइयो:: Rojgar Manch ::
विहिवार, २०७४ आश्विन २६ गते २१:०१
विश्वमा रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन नजिकिदैं जाँदा राजधानी एनआरएनमय बनेको छ । अक्टोवर ११ लाई एनआरएनले ‘एनआरएन दिवस’ मनाएको छ ।
एनआरएनको विश्व सम्मेलनका लागि काठमाडौं आएका विश्वभरका एनआरएनले आफ्नो दिवसलाई बिहान स्वयम्भूनाथमा पूजा गरेका छन् । त्यसलगत्तै पशुपतिनाथ पुगेर दीप प्रज्वलन गरिएका छन् ।
एनआरएन दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा संघका प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछाने, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्षहरु, भवन भट्ट, कुमार पन्त, महासचिव, बद्री केसी लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
यही अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमाडांैको होटल ह्यातमा हुने विश्व सम्मेलनसँगै नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुने हँुदा राजधानी एनआरएनमय भएको हो । गैरआवासीय नेपालीहरुको विश्व सम्मेलनको तयारी चलिरहँदा उनीहरु माथि नेपाल र नेपालीले ठुलो अपेक्षा राखेका छन । एनआरएनएले स्थापनाकालदेखि नै समृद्ध मुलुक निर्माणको परिकल्पना गरिरहँदा उनीहरु माथि देश र आम नेपालीको अपेक्षा थप बढेको हो ।
रसियाबाट डा. उपेन्द्र महतोले सुरुवाती गरेको एनआरएनए अहिले ७७ देशमा पुगिसकेको छ । ‘नेपाल बाहिरको नेपाल’ भनेर अहिले एनआरएनहरु चिनिरहेका छन् । विदेशमा केही पैसा आर्जन गर्ने र आफ्नो जीवनस्तर बढाएका नेपालीहरु रहेको एनआरएनए प्रति आम नेपालीहरुको अपेक्षा रहनु स्वभाविक हो ।